Le complexe su Castor (2011)
2011-10-26 @ 04:26 in Sarimihetsika
Mitady torimaso ety ambony bus dia manoratra eto amin'ny blaogy vetivety. Tiako tehirizina ato fotsiny ilay film hoe "The Beaver" na "Le complexe du castor" (2011) tontosain'i Jodie Foster, ary lalaoviny miaraka amin'i Mel Gibson. Nety tsara mihitsy ny casting, ary tena efa mahay i Jodie Foster fa nivoaka tsara ilay izy.
Mitantara ny dingana fanasitranan-tena (process of auto-healing) nataon'ny lehilahy iray izay tratran'ny depression ilay izy. Mba hahafahany manao ny asany sy ny fiainany ara-dalana dia nandray personnage hafa izy (castor) ka iny no nentiny nahatafita indray ny orinasa. Ny olany manokana, eo anivon'ny fianakaviany, izay tsy manaiky ny fisian'ilay "castor", anefa tsy mety mivaha. Dia io no votoatin'ny tantara.
Nety tamin'i Jodie Foster mihitsy ny "role" noraisiny, renim-pianakaviana be adintsaina (toy ny mahazatra), ary i Mel Gibson koa tsy nandisso fanantenana na dia somary mi-exagérer ihany aza izy. Fa misy an'ilay sipa iray iny (hjereko amin'ny internet refaveo ny anarany fa milalao amin'ny X-Men izy Jennifer Lawrence) hitako hoe tsara safidy koa. Misy mantsy tsy dia tafiditra loatra amin'ny personnage entiny.
Any am-piasana apetrak ny sary.